नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : न बिजुली छ न पानी, न शान्ति छ न संबिधान !
न बिजुली छ न पानी, न शान्ति छ न संबिधान !
न बिजुली छ न पानी, न शान्ति छ न संबिधान, न जनतालाई न्याय छ न जनताको कोही नेता ! तर पनि मेरो देश चलिरहेको छ पशुपतिनाथकै कृपाले ! काठमाडौंको यो अस्तब्यस्तता र फोहोर का बिच पनि नेपाल संसारकै सुन्दर लाग्छ, स्वर्ग लाग्छ, आखिर मन त नेपाली न हो ! हेर्नुस यो भिडियो